Kuita munharaunda yehutano nekugara zvakanaka kwevanhu
kuziva zvinotemerwa zvehutano, zvitsigiro zvechiito cheveruzhinji muhutano, magariro uye nharaunda kusaenzana muhutano uye pakupedzisira matambudziko makuru muhutano nhasi,
kunanga iyo yakakosha mitemo maererano nehutsanana, vaccination, hutano, chikafu kana kunyangwe kuita zvemitambo,
kuziva kukanganisa kwekugara, kwemuviri uye nharaunda nharaunda pahutano hweumwe neumwe wedu
Tese tinobatwa nenyaya dzeutano.
Panhanho dzenyika nedzemunharaunda, mitemo yakawanda inoshandiswa kugadzirisa nyaya dziri panguva imwe chete demographic, epidemiological uye societal uye bvumira munhu wose kurarama muhutano hwakanaka kwenguva yakareba sezvinobvira.
Nzira dzekuita dzakasiyana-siyana, kunyanya maererano ne kudzivirira uye kusimudzira utano.
Hunhu hwemhepo, hutano, hutsanana, basa remuviri, mamiriro ekushanda, hukama hwemagariro, kuwana kuchengetwa kwemhando yepamusoro zvinhu zvese zvinopa hutano hwakanaka huzhinji.
Aya madingindira akasiyana achataurwa muzvikamu zvitatu. Tichaedza kutsanangura marongero enyika tichiaratidza kuburikidza nemienzaniso yenzvimbo.
Kuita munharaunda yehutano nekugara zvakanaka kwevanhu January 17th, 2022Tranquillus
VERENGA Zvese nezve Youth Engagement Contract (CEJ)
pashureHuwori, rusarura, utsotsi… zvingadzivirirwe sei muhutungamiri hwenzvimbo?
zvinoteveraIzvo zvakakosha zvekuita kwevanhu
07| Chii chinoitika panopera kosi yekudzidziswa?
Kudzidziswa kweFNE: wana imwe mari yekubhadhara kudzidziswa kwako!
Wongorora Izwi Pamhepo
Pakarepo uve wakawanda WEMAHARA (muna 2021)